विप्लवजी अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्दै हुनुहुन्छ : सीपी गजुरेल – Lokpati.com
मृत्यु अपराध चितवन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस सरकार प्रचण्ड केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राशिफल प्रधानमन्त्री अमेरिका नेकपा नेपाल प्रहरी पक्राउ
तपाईंहरूको पार्टीको सार्वजनिक उपस्थित कम हुँदै गएको देखिन्छ। पार्टीभन्दा मोर्चा हाबी हुँदै गएको हो ?
बाहिरबाट हेर्दा मोर्चा हाबी भएजस्तो देखिन्छ। जनवर्गीय मोर्चाको पनि त्यसैले नेतृत्व गरेको हुन्छ। आवरणमा मोर्चा देखिन्छ। पार्टी विस्तारै भूमिगत हुँदै जाने भएकाले बाहिर कम देखिँदै जान्छ। पार्टीले त नेतृत्व गर्ने भएकाले पार्टीलाई क्रस गरेर जाने भन्ने हुँदैन।
तपाईंहरूको पार्टी आफूले चुनाव जित्ने अवस्थामा उपयोगमा जाने,तर हार्ने स्थिति देखिए बहिष्कार गर्ने नीति लिएको हो ?
प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले गराउने चुनावलाई क्रान्तिकारी पार्टीले कार्यनीतिको विषय बनाउँछ। जित्ने र हार्ने दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरा चुनावलाई उपयोग गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने हुन्छ। पार्टीले निर्वाचनलाई उपयोग बहिष्कार जुन गरे पनि माध्यम क्रान्तिकारी मोर्चालाई बनाउनुपर्छ। हामीले यसअघिको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जित्छौँ भनेर लागेकै थिएन। त्यो वेला हामीले भनेकै थियाैँ कि यो प्रतिक्रियावादी सत्तामा जुन पार्टीले प्रतिनिधित्व गरेका छन्, त्यसलाई भण्डाफोर गर्ने हो। त्यो चुनावलाई उपयोग गरेर भण्डाफोर गर्‍यौँ।
चुनाव उपयोग गर्दा मञ्चलाई प्रयोग गर्न पाइन्छ। मञ्चमा बोल्ने कुरा हाम्रो हातमा हुन्छ। चुनाव जित्नका लागि उपयोग गरेको होइन। हामीले स्थानीय तहमा त्यस्तै पाँचदेखि सात सिट जित्यौँ, त्यति नै हो। प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा जित्दै जितेनौँ। जित्नका लागि चुनावमा गएको भए एलाइन्स गर्ने थियौँ। गरेनौँ। प्रतिक्रियावादी सरकार र संविधानको भण्डाफोर भयो। अहिले अरूले नै भण्डाफोर गर्न थालेपछि हामीले नगरे पनि हुने भयो। यसैले यस पटकको उपनिर्वाचनमा भाग नलिने सोचेका छौँ।
तपाईंहरू सत्तारुढ नेकपासँग पनि मिल्न सक्नुभएको छैन। विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग पनि नजिक हुनु हुन्न, किन ?
सत्तारुढ नेकपा वास्तवमा बढी एमाले नै हो। एमालेमा माओवादी मिसिएपछि नेकपा बनेको छ। एमालेलाई हामीले संशोधनवादी धेरै पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ। हामीले जनयुद्ध सुरु गरेको एमाले सत्तामा हुँदाहुँदै हो। अझ त्यसभन्दा बढ्ता विचलनमा गइरहेको छ। दक्षिणपन्थीसँग हामी मिल्ने भन्ने कुरै भएन। डबल नेकपासँग एकता गर्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीसँगको एकता हुँदै होइन। त्यसबारे हामीले सोच्दै सोच्दैनौँ। विप्लवजीहरू हामीबाटै अलग हुनुभएको हो।
अलग नहुनुुस् भनेका थियाैँ। मान्नुभएन। उहाँहरू अलग नभएको भए अहिले परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो। उहाँको सही नीति र कार्यदिशा थियो भने सँगै बसेर काम गर्न सकिन्थ्यो। उहाँहरूको कार्यदिशा अस्पष्ट छ। एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुहुन्छ, त्यो के भनेको हो ? उहाँका केही साथीले सहादत प्राप्त गरिसक्नुभयो, तर उहाँहरूले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेकै होइन भन्नुहुन्छ। पुलिस र सेनासँग लड्ने नै होइन भन्नुहुन्छ। कर्मचारीतन्त्रसँग लड्ने होइन भन्नुहुन्छ।
खालि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भन्नुहुन्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिँदैन। संशोधनवादी, सुधारवादीहरूले पनि कारबाही गर्छन्। कारबाही गर्न अख्तियार छ, प्रहरी प्रशासनलगायत थुप्रै संस्था छन्। भ्रष्टाचारीकै लागि हतियार उठाउनुपर्ने जरुरी छैन। त्यसकारण उहाँ आफैँ अस्पष्ट हुनुहुन्छ। मित्रशक्ति र दुस्मन शक्तिको कुनै विश्लेषणै छैन। यो ढंगले देशमा क्रान्ति हुन सम्भव छैन। कार्यदिशा नै स्पष्ट नभएपछि केका लागि पार्टी एकता गर्ने ? उहाँहरूमा स्पष्टता छैन। विप्लवहरूको काम अँध्यारोमा ढुंगा हानेजस्तै छ।
संसद्बाहिरका शक्तिसँग कार्यगत एकता गर्न खोज्नुभएको थियो । अहिले त सबै लाखापाखा लागे त ?
विप्लवजी, माले, मसाल, कट्टेलजी, हामी (क्रान्तिकारी माओवादी) मिल्दा कार्यगत एकता राम्रो र ठूलै भयो। विप्लवजीको पार्टीमा प्रतिबन्ध लागिसकेपछि खुला कार्यक्रममा आउन सक्दिन भन्नुभयो। नीतिगत भिन्नता केही थिएन, उहाँ अलग हुनुभयो।
मसालको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट भएन। उहाँहरू यसलाई मूलतः वामपन्थीहरूको सरकार भन्नुहुन्छ। वामपन्थीको सरकारलाई वामपन्थीले सहयोग पो गर्नुपर्छ भन्ने देखियो। उहाँहरूको यहाँनिर अस्पष्टता छ। संविधान ठिकै हो, तर संघीयता हुनुहुँदैन भन्नुहुन्छ। मालेका साथीहरूले विप्लवजीको पार्टीमा प्रतिबन्ध लागेपछि हामीलाई पनि आरोप लगाउँछन् भनेर बस्न मान्नुभएन। हामीले अहिले पनि अरू घटकसँग कोसिस गरिरहेका छौँ।
महराको स्वास्थ्य जटिल : अस्पतालमै बयान लिने तयारी
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटनाः मृत शिशु निकालेपछि बच्यो सुनिताकाे ज्यान
मेडिकल उपकरण खरिद महंगो हुँदा प्रश्न उठ्यो : गृहमन्त्री थापा (अन्तर्वार्ता)